Imaneja inethemba ngoMasuku kwiBucs | News24
Imaneja inethemba ngoMasuku kwiBucs
Johannesburg – Umphathi wezindaba zikaKhethokwakhe Masuku u-Abbie Rsimphi uthe usanethemba lokuthi umdlali wakhe usazoqhubeka nokuzinza kwi-Orlando Pirates nakuba engasalinuki ijezi.
Lo mdlali oneminyaka engu-29 ubudala kulindeleke ukuthi inkontileka yakhe neBucs iphele ngoJuni 2015.
Nakuba kunjalo uRasimphi uthi iBucs isaneuthuba lokwelula le nkontileka ngeminye iminyaka emibili.
OLUNYE UDABA: Usebumnyameni umqeqeshi weqembu eligawulwe yizembe
“Njengoba ngangishilo phambilini uMasuku usengumdlali wePirates futhi usazohlala kuyona.
Inkontileka anayo ivumela iPirates ukuthi imnikeze eminye iminyaka emibili uma isamdinga,” uRasimphi etshela iSiya Crew.
IBucs kusalindeleke ukuthi ikuqinisekise ukuthi izolisebenzisa yini ithuba layo lokwelula inkontileka kaMasuku ngeminye iminyaka emibili.
Kusukela ngoJanuwari kuamahlebezi athi lo mdlali kungenzeka ayifulathele iBucs.